‘बुद्धिजीवी’लाई प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष: ‘वादविवाद गर्न खोजेको हो ? म पनि जवाफ दिऊँ ?’ – mYKantipur.Com
‘बुद्धिजीवी’लाई प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष: ‘वादविवाद गर्न खोजेको हो ? म पनि जवाफ दिऊँ ?’
२० मंसिर, काठमाडौं । एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सक्रिय सहभागितालाई लिएर आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पाएको पदक जायज भएको बताएका छन् । साथै आफूले जवाफ दिँदा थला पर्न सक्ने भन्दै आफूसँग वादविवाद गर्नुअघि एकपटक सोच्न बुद्धिजीवीहरुलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
क्रिश्चियन धर्मसँग जोडिएको विवादास्पद संस्थाले गरेको सम्मेलनमा सरकार ‘सहआयोजक’ को हैसियतमा सहभागी भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
समिटमा सरकारको सहभागितालाई सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने कार्यक्रम धर्म प्रचारसँग सम्बन्धित नभएको बताएका छन् ।
बुद्धिजीवीलाई चेतावनी – म पनि जवाफ दिऊँ ?’
चुनावअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा ‘तपाई बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ भनेको प्रशंग सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धिजीवी’bout दिएको प्रतिक्रियाले पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यसैगरी चर्चा पाएको छ ।
केही बुद्धिजीवीहरुले तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल टेलिभिजनबाट बुधबार प्रशारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाए ।
‘मेरो बोलीमा खोट भए बहस गरौं’
ओलीले थपे, ‘होइन भने एउटा बुद्ध धर्मावलम्बीले बोल्न थाल्यो भने बुद्धम शरणम गच्छामीबाट सुरु गर्छ । हिन्दुले सुरु गर्‍यो भने सर्वे भवन्तु सुखिनबाट सुरु गर्ला अथवा अर्कोबाट सुरु गर्ला । उसको धर्म, उसको विश्वास निजी विषय हुन् ।’
कार्यक्रमको उद्देश्य र छलफल कुनै धर्मसँग सम्वन्धित नभएको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
सम्मान जायज छ
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनका क्रममा आफूले पाएको सम्मान र त्यसलाई लिएर भएको आलोचना’bout पनि मुख खोलेका छन् । ‘जुन सम्मान र पदक मैले पाएको हुँ, त्यो नेपाली जनताको सफलताको, नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षले पाएको सम्मान हो’ उनले भने, ‘जुन बहुत जायज हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले एसिया समिटिमाथि भएको विरोधलाई अर्थतन्त्र र पर्यटनलाई अगाडि बढाउने प्रयासमाथिको हमला भनेका छन् ।
हेटौंडाको सडक क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री र सुमार्गीको घर, जोगिन्छ कि भत्किन्छ ?